Afrika Atsimo · Oktobra, 2007 · Global Voices teny Malagasy
Afrika Atsimo · Oktobra, 2007
Tantara mikasika ny Afrika Atsimo tamin'ny Oktobra, 2007
Teknolojia 26 Oktobra 2007
Afrika Atsimo : Afrikana Tatsimo lany ho mpilalao baolina lavalava mendrika indrindra
Fanatanjahantena 22 Oktobra 2007
Ny mpiblaogy Nich Harambous dia velon-dera ny mpilalao baolina lavalava Bryan Habana izay lany ho mpilalao baolina lavalava mendrika indrindra : « The man is pure brilliance. He equalled Jona Lomu’s RWC record for tries scored (8) and definitely made his mark as one of South Africa’s all time great...
Teknolojia 22 Oktobra 2007
Blog Action Day: Feon'i Afrika sy ny diaspaora
Kenyà 17 Oktobra 2007
Anio dia lohahevitra tokana no hobanjinin’ny mpibilaogy maro dia ny tontolo iainana. Nandray anjara betsaka tamin’ny alalan’ny endrika sy fomba fanoratra samihafa ireo mpibilaogy avy eto Afrika sy avy any ampielezana. Ireto manaraka ireto ny rohy sy ny sombiny avy ao Kenya, Afrika Atsimo, Nizeria ary avy amin’ny hafa ihany...
Fanatanjahantena 16 Oktobra 2007
Ghana 12 Oktobra 2007
Hisy e-varotra ve eto Afrika?
Nizeria 03 Oktobra 2007
Nahaliana ny adi-hevitra momba ny ho avin’ny e-varotra eto Afrika tamin’iny herinandro lasa iny. Natomboky Oluniyi David Ajao tamin’ny lazan’ny e-gold (vola an-tsoratra manana sandam-bolamena) ao Nigéria ny resaka. Mety hanjohy io fahombiazana io koa ny fandoavam-bola amin’ny alalan’ny karatra hafa eto Afrika :Nahoana no tena tiam-bahoaka ny e-gold ao Nigéria?...